Ole Gunnar Solskjaer Oo Dagaal U Gali Doona Inuu Ilaashado Shaqadiisa Man United Kadib Markii Uu Lumiyay Kalsoonidii Ed Woodward. - Gool24.Net
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa dagaal adag u gali doona inuu ilaashado shaqadiisa kadib markii uu waayay gabi ahaanba kalsoonidii maamulka kooxda sida ay warinayaan warbaahinta wadanka Ingiriiska.
Gudoomiye ku xigeenka fulinta Red Devils Ed Woodward kaas oo ah shaqsiga Ole Gunnar gacanta u galiyay heshiiska uu kooxda ku maamulayo ayaa lagu soo warramayaa inuu haatan lumiyay dulqaadkii uu ugu adkeysan lahaa natiijooyinka foolxumada ah ee kooxda soo gaaraya.
Red Devils oo 20-jeer heysata horyaalka Ingiriiska ayaa guuldaro kala kulantay Newcastle United isbuucaan, waana middii saddexaad oo ay kooxda la kulanto tan iyo markii uu bilowday fasal ciyaareedkaan, waxeyna taasi keentay iney kasoo muuqato booska 12-aad.
Ciyaariyahankii hore Manchester United Paul Ince ayaa ka dhawaajiyay iney kooxda haatan tahay wax laga xishoodo, sidoo kalana Ole Gunnar uu ku guuleysan waayay inuu xasiliyo qolka labiska.
Warbixinada la baahiyay waxey sheegayaan in Ole Gunnar uu albaabka Old Trafford ka bixi doono hadii kooxdiisa ay guuldaro kala kulanto Liverpool marka laga soo laabto ciyaaraha qaramada, labada kooxood ayaana isku wajahi doona ciyaaraha wareega 9-aad ee horyaalka.